प्रचण्डले अर्की बुहारीलाई पनि उतारे मैदानमा, कसले मार्ला बाजी ? — Imandarmedia.com
प्रचण्डले अर्की बुहारीलाई पनि उतारे मैदानमा, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्की बुहारीलाई पनि मैदानमा उतारेकी छन्। विना मगर मन्त्री भइसकेकी छन्।
यसैबीच, प्रचण्डसँग सल्लाहपछि पार्टीले पोखरा महानगरको उपमेयरमा सिर्जना त्रिपाठीलाई उपमेयरमा सिफारिस गरेको छ। महानगर कमिटीको सोमबार बिहान बसेको बैठकले मेयर र उपमेयर सिफारिस गर्दा त्रिपाठी उपमेयरमा सिफारिस भएकी हुन्।
उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की बुहारी पनि हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डका दिवंगत छोरा प्रकाश दाहालले त्रिपाठीसँग विवाह गरेका थिए।उनीहरूका एक छोरा पनि छन्। त्रिपाठीपछि प्रकाशले बिना मगरसँग विवाह गरेका थिए।
प्रकाशको मृत्युपछि त्रिपाठी पोखराको राजनीतिमा क्रियाशील छिन्। महानगर समितिको बैठकले मेयरमा प्रदेश कमिटी सदस्य विश्वप्रकाश लामिछाने, सीता खड्का र जिल्ला संयोजक बखानसिंह गुरूङलाई सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, उपमेयरमा प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेकी त्रिपाठीसहित गोमा ढकाल र महानगर सदस्य सूर्यप्रकाश तिवारी सिफारिस भएका छन्। मेयर र उपमेयरका लागि महानगर कमिटीले सर्वसम्मत नाम सिफारिस गरेको केन्द्रीय सदस्य दीपक कोइरालाले जानकारी दिए।
पोखरा महानगरको मेयरमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ। कांग्रेसले हैसियतभन्दा ठूलो भाग खोजेको भन्दै समाजवादीलाई गठबन्धनबाट बाहिरिएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गरिसकेको छ।
गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रलाई महानगरको उपमेयर दिन कुनै समस्या नभएको कांग्रेसले जनाएको छ। प्रदेश सांसदसमेत रहेका माओवादी नेता कोइरालाले महानगरका विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्ने बताए।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक कडा अभिव्यक्ती दिएका छन्। आफ्नै छोरी रेणु दाहाललाई नै झस्काउनेगरी प्रचण्डको अभिव्यक्ती आएको हो।
स्रोतका अनुसार चितवन कांग्रेसको चर्को दबाब थेग्न नसकेर यस्तो अभिव्यक्ती प्रच्ण्डबाट आएको हुनसक्ने बताइन्छ। प्रचण्डले पार्टीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा छोरी रेणु दाहालका लागि मेयर नमागेको बताएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अध्यक्ष दाहालले भरतपुर महानगर नै चाहिने र मेयरमा रेणुलाई नै उठाउनुपर्ने दाबी आफूहरूले नगरेको बताएका हुन्।
रेणुलाई भरतपुर चाहियो‚ नभए हुन्न भन्ने कुरामा सत्यता छैन। उनले भने, हामीले केवल जित्न सजिलो हुने स्थान हेरेर बाँडफाँट गरौं भनेका हौं। त्यसमा कांग्रेसका धेरैलाई पनि भरतपुरमा हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने छ।
तर केहीलाई त्यस्तो लागेको छैन। उनले ६ वटा महानगरपालिकामध्ये ३ वटा कांग्रेसले लिओस् र बाँकी तीनवटा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादीबीच भागबन्डा हुने गरेर गठबन्धन भित्र सहमति हुन लागेको उनले दाबी गरे।
अध्यक्ष दाहालले आफूहरुलाई जनुसुकै नगरपालिका भए पनि हुने र भरतपुर नै चाहियो भनेर अडान नलिएको बताए।